Qaababka kale ee waxbarashada
Waxaa jira dalabyo kale oo ay ardayda ku wadan karaan waxbarashadooda dugsiga sare ka dib. Waxbarashada Tababarka Dugsiga Sare (Yrkeshögskolan) waxay isku jiraan waxbarashada maadooyinka tiirootikalka ah iyo kuwa maadada ah oo wada shaqayn dhow aad la samaysaa shirkaddaha iyo hay'addaha. Waxaa la bixiyaa barnaamijyada marka ay jiraan dalabyo awood xirfadeed ee maadooyinkaas. Macluumaad dheeri ah waxaa laga heli karaa www.yrkeshogskolan.se.
Sidoo kale ardayda koorsooyinka iyo barnaamijyada waxay ka baran karaan dugsiga sare ee folk. Qiyaas ahaan Sweden waxaa ka jira 175 oo ah dugsiyada sare ee folk, ayaa dadka qaangaarka ah siiyo waxbarasho maadooyinka qaar ah. Iskuullada sare ee folk ayaa ardayda ka caawiyo in ay udiyaariyaan jaamacadda, ama shaqsiyaadka siiya macluumaad ku saabsan barnaamijyo dheeraad ah oo ay daneeyaan. Si aad waxbadan aad uga oggaato booqo www.folkhogskola.se.